သဈတံခါးဆရာတျော အရှငျမဏိဇောတ( ယော )၏ ” မွေ”ပိုငျရှငျ “အိမျ”ပိုငျရှငျဖွဈအောငျ ဆောငျရှကျနညျး……. – Youth Bar
သဈတံခါးဆရာတျော၏ “မွပေိုငျရှငျ၊ အိမျပိုငျရှငျ”ဖွဈအောငျ ဆောငျရှကျနညျး၊ မွနျမာဂမ်ဘီရ လောကီဝိဇ်ဇာ ဓရ ပညာဖွငျ့ “မွပေိုငျရှငျ၊ အိမျပိုငျရှငျ”ဖွဈအောငျ ဆောငျရှကျနညျး
သဈတံခါးဆရာတျော၏ ရေးသားဖျောပွခကျြအား အဓိဋ်ဌာနျကငျြ့ဆောငျပုံ တငျပွပေးခွငျးပါ။မိမိမှာ အိမျပိုငျရှငျ မွပေိုငျရှငျဖွဈလိုပါက နစေ့ဉျနတေို့ငျး ထမငျးစားသောကျသညျ့အခါ မိမိစားသုံးနသေော စားပှဲမှလညျးကောငျး
တဈနရောတှငျ သီးသနျ့ထား၍သျောလညျးကောငျး တဈယောကျစာ တဈပနျးကနျစာကို ဟငျးအားလုံး စုပုံထညျ့ကာ ခကျရငျး၊ ဇှနျး တပျပွီး လကျနှငျ့ကိုငျမွှောကျကာ ”ဂင်ျဂါဝါဠု သဲစုမက ပှငျ့တျောမူပွီးကွသော မွတျဗုဒ်ဓအဆူဆူတို့အား တဈပှဲ။
ရဟန်တာ ပုဂ်ဂိုလျထူးပုဂ်ဂိုလျမွတျမြားနှငျ့ သံဃာတျောအပေါငျး အရိယာဝိဇ်ဇာဓမ်မဝိဇ်ဇာထှကျရပျလမျး စရောကျတျောမူကွသော ဝိဇ်ဇာထိုရျသူတျောကောငျးအပေါငျး အရှငျကောငျးတို့အား ကိုယျတိုငျကွှရောကျ၍ ဘုနျးပေးတျောမူကွပါ။
သုံးဆောငျတျောမူကွပါဟု ”ပငျ့ဖိတျ၍ အလှုဒါနပွုပေးပါ၊သောကျတျောရေ(သို့)ရနှေေးကွမျးတဈခှကျစီခြ၍ ကပျလှူပေးပါ။ ကပျလှူထားသော ပနျးကနျ၂ခုထဲတှငျ အခြိူ ပှဲပါစုပုံပွီး ကပျလှူပါ။
မိမိထမငျးစားပွီးပါက မွတျဗုဒ်ဓနှငျ့ရဟန်တာမြား၊ အရိယာဝိဇ်ဇာ၊ ဓမ်မဝိဇ်ဇာတို့အတှကျ အလှူဒါနပွုထားသော ပနျးကနျမြားကိုကိုငျပွီး မွကွေီးအလှတျတဈနရောတှငျ(မွပွေငျပျေါတှငျ ဘာမှမခငျးရပါ။)
သစ်စာပွုကာ “တပညျ့တျော တဈခါမှမလှူဒါနျးဖူးသော အလှူဒါနကို လှူဒါနျးပါ၏ ဘုရားတပညျ့တျောသညျ မွကွေီးပျေါမှာနေ၊ မွကွေီးပျေါမှာစား၊ မွကွေီးပျေါမှာ ကငျြကွီးကငျြငယျစှနျ့ကာ နထေိုငျသညျ့အတှကျ
‘အသငျ’မွကွေီးသညျ ကြေးဇူးကွီးမားလှပါသညျ။ ဤကဲ့သို့ ကြေးဇူးကွီးမားလှသောကွောငျ့ ဤမွကွေီးကို စောငျ့ရှောကျနပေါသော ‘ဝသုန်ဒရေ’မွစေောငျ့နတျမငျးနှငျ့
မွကွေီးပျေါတှငျရှိကွကုနျသော ပုရှတျဆိတျ၊ တီကောငျ၊ ပိုးကောငျမှားကောငျ အစရှိသော သတ်တဝါမှနျသမြှတို့သညျ ဘုရားတပညျ့တျောစားသလို စားနိုငျပါစေ။ ဘုရားတပညျ့တျော ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ စုံစုံလငျလငျ သုံးဆောငျရသလို သုံးဆောငျရပါစေ၊
အေးခမျြးကွပါစေ၊ သာယာကွပါစေ၊ ကနျြးမာကွပါစေ၊ ခမျြးခမျြးသာသာ စားသောကျ နိုငျကွပါစေ”ဟု သစ်စာပွုဆုတောငျးကာအရငျကပျလှုထားသော ထမငျးဟငျး ၂ပှဲ၊ ရတေို့ကို တဝကျစီခှဲ၍ မွကွေီးပျေါပုံပါ
အလှူဒါနပွုပါ ဆှတေျောမြိူးတျောအပေါငျးနှငျ့ မွငျအပျသောပုဂ်ဂိုလျ မမွငျအပျသောပုဂ်ဂိုလျ ‘ဝသုန်ဒရေ’နတျမငျးနှငျ့ (၃၁)ဘုံသား သတ်တဝါမြား စားသုံးတျောမူကွပါ။
သုံးဆောငျတျောမူကွပါ။ ဤကဲ့သို့ ကုသိုလျကောငျးမှု့ထူး ကို ပွုလုပျရပါသောကောငျးကြိူးမြားကွောငျ့
“ဘုရားတပညျ့တျော(နာမညျ)သညျ “မွပေိုငျရှငျ အိမျပိုငျရှငျ”သူဋ်ဌေးကွီး မကွောငျ့မကွ မတောငျးတရပဲ ဖွဈနိုငျပါစေ။
အမွနျဖွဈ၍ ဘာသာအကြိူးး သာသနာအကြိူးး သာသနာပွုနိုငျပါစသေား”ဟု ဆုတောငျးသစ်စာပွုပါ။
ကနျြတဈဝကျကို မိမိစားပါ။ရောဂါပြောကျပါစေ၊ ကနျြးမာပါစေ၊ လာဘျလာဘပှငျ့ပါစေ၊ ဝငျငှတေိုးပါစဟေုရှတျ၍ လကျတှဆေ့ောငျရှကျကွညျ့ပါ။ လကျတှအေ့ကြိူးပေးသောကွောငျ့ သခြောဆောငျရှကျပွီး အဓိဋ်ဌာနျလုပျကွညျ့ကွပါ
အစစအရာရာ အဆငျပွေ၍ အောငျမွငျလာပါလိမျ့မညျ။
သစ်တံခါးဆရာတော်၏ “မြေပိုင်ရှင်၊ အိမ်ပိုင်ရှင်”ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နည်း၊ မြန်မာဂမ္ဘီရ လောကီဝိဇ္ဇာ ဓရ ပညာဖြင့် “မြေပိုင်ရှင်၊ အိမ်ပိုင်ရှင်”ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နည်း
သစ်တံခါးဆရာတော်၏ ရေးသားဖော်ပြချက်အား အဓိဋ္ဌာန်ကျင့်ဆောင်ပုံ တင်ပြပေးခြင်းပါ။မိမိမှာ အိမ်ပိုင်ရှင် မြေပိုင်ရှင်ဖြစ်လိုပါက နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ထမင်းစားသောက်သည့်အခါ မိမိစားသုံးနေသော စားပွဲမှလည်းကောင်း
တစ်နေရာတွင် သီးသန့်ထား၍သော်လည်းကောင်း တစ်ယောက်စာ တစ်ပန်းကန်စာကို ဟင်းအားလုံး စုပုံထည့်ကာ ခက်ရင်း၊ ဇွန်း တပ်ပြီး လက်နှင့်ကိုင်မြှောက်ကာ ”ဂင်္ဂါဝါဠု သဲစုမက ပွင့်တော်မူပြီးကြသော မြတ်ဗုဒ္ဓအဆူဆူတို့အား တစ်ပွဲ။
ရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များနှင့် သံဃာတော်အပေါင်း အရိယာဝိဇ္ဇာဓမ္မဝိဇ္ဇာထွက်ရပ်လမ်း စရောက်တော်မူကြသော ဝိဇ္ဇာထိုရ်သူတော်ကောင်းအပေါင်း အရှင်ကောင်းတို့အား ကိုယ်တိုင်ကြွရောက်၍ ဘုန်းပေးတော်မူကြပါ။
သုံးဆောင်တော်မူကြပါဟု ”ပင့်ဖိတ်၍ အလှုဒါနပြုပေးပါ၊သောက်တော်ရေ(သို့)ရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်စီချ၍ ကပ်လှူပေးပါ။ ကပ်လှူထားသော ပန်းကန်၂ခုထဲတွင် အချိူ ပွဲပါစုပုံပြီး ကပ်လှူပါ။
မိမိထမင်းစားပြီးပါက မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်ရဟန္တာများ၊ အရိယာဝိဇ္ဇာ၊ ဓမ္မဝိဇ္ဇာတို့အတွက် အလှူဒါနပြုထားသော ပန်းကန်များကိုကိုင်ပြီး မြေကြီးအလွတ်တစ်နေရာတွင်(မြေပြင်ပေါ်တွင် ဘာမှမခင်းရပါ။)
သစ္စာပြုကာ “တပည့်တော် တစ်ခါမှမလှူဒါန်းဖူးသော အလှူဒါနကို လှူဒါန်းပါ၏ ဘုရားတပည့်တော်သည် မြေကြီးပေါ်မှာနေ၊ မြေကြီးပေါ်မှာစား၊ မြေကြီးပေါ်မှာ ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ကာ နေထိုင်သည့်အတွက်
‘အသင်’မြေကြီးသည် ကျေးဇူးကြီးမားလှပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ကျေးဇူးကြီးမားလှသောကြောင့် ဤမြေကြီးကို စောင့်ရှောက်နေပါသော ‘ဝသုန္ဒရေ’မြေစောင့်နတ်မင်းနှင့်
မြေကြီးပေါ်တွင်ရှိကြကုန်သော ပုရွတ်ဆိတ်၊ တီကောင်၊ ပိုးကောင်မွှားကောင် အစရှိသော သတ္တဝါမှန်သမျှတို့သည် ဘုရားတပည့်တော်စားသလို စားနိုင်ပါစေ။ ဘုရားတပည့်တော် ပြည့်ပြည့်ဝဝ စုံစုံလင်လင် သုံးဆောင်ရသလို သုံးဆောင်ရပါစေ၊
အေးချမ်းကြပါစေ၊ သာယာကြပါစေ၊ ကျန်းမာကြပါစေ၊ ချမ်းချမ်းသာသာ စားသောက် နိုင်ကြပါစေ”ဟု သစ္စာပြုဆုတောင်းကာအရင်ကပ်လှုထားသော ထမင်းဟင်း ၂ပွဲ၊ ရေတို့ကို တဝက်စီခွဲ၍ မြေကြီးပေါ်ပုံပါ
အလှူဒါနပြုပါ ဆွေတော်မျိူးတော်အပေါင်းနှင့် မြင်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ် မမြင်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ် ‘ဝသုန္ဒရေ’နတ်မင်းနှင့် (၃၁)ဘုံသား သတ္တဝါများ စားသုံးတော်မူကြပါ။
သုံးဆောင်တော်မူကြပါ။ ဤကဲ့သို့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု့ထူး ကို ပြုလုပ်ရပါသောကောင်းကျိူးများကြောင့်
“ဘုရားတပည့်တော်(နာမည်)သည် “မြေပိုင်ရှင် အိမ်ပိုင်ရှင်”သူဋ္ဌေးကြီး မကြောင့်မကြ မတောင်းတရပဲ ဖြစ်နိုင်ပါစေ။
အမြန်ဖြစ်၍ ဘာသာအကျိူးး သာသနာအကျိူးး သာသနာပြုနိုင်ပါစေသား”ဟု ဆုတောင်းသစ္စာပြုပါ။
ကျန်တစ်ဝက်ကို မိမိစားပါ။ရောဂါပျောက်ပါစေ၊ ကျန်းမာပါစေ၊ လာဘ်လာဘပွင့်ပါစေ၊ ဝင်ငွေတိုးပါစေဟုရွတ်၍ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ကြည့်ပါ။ လက်တွေ့အကျိူးပေးသောကြောင့် သေချာဆောင်ရွက်ပြီး အဓိဋ္ဌာန်လုပ်ကြည့်ကြပါ
အစစအရာရာ အဆင်ပြေ၍ အောင်မြင်လာပါလိမ့်မည်။
သဈတံခါးဆရာတျော အရှငျမဏိဇောတ( ယော )၏ ” မွေ”ပိုငျရှငျ “အိမျ”ပိုငျရှငျဖွဈအောငျ ဆောငျရှကျနညျး…. …….